Maitiro ekuvandudza iPad maapps | IPhone nhau
Maitiro ekuvandudza iPad maapp
Iyo App Store ndiyo iyo sosi chete oficial kukwanisa kuwana maficha eiyo iPad yedu. Maapplication ese atinowana muchitoro cheApple apasa mafirita akasiyana anotivimbisa kuti mudziyo wedu haukanganisike nemarware kana chero imwe mhando software yakaipa iyo inogona kuisa data ratinochengeta pachigadzirwa chedu.
Kunyange ichokwadi kuti App Store haisi iyo chete sosi yekuisa maapplication (Kuburikidza neJailbreak tinogona kuisa tweaks kuti tishandure iPad yedu kuburikidza neimwe chitoro Cydia) ndiyo inonyanya kukurudzirwa kunyanya kana isu tiri vatsva kuchikuva ichi. Nekufamba kwenguva uye sezvaunosvika pakuziva chako chishandiso uye iOS zvakajairika, unogona Jailbreak kugadzirisa yako iPad zvinoenderana nezvaunoda.
Gadziridza maapplication pane iPad
Chekutanga pane zvese isu tichaenda kune iyo app chitoro icon. Iyo App Store icon ichave ine denderedzwa dzvuku ine nhamba, inoratidza huwandu hwezvishandiso zvakamirira kugadzirisa.
Kana tangovhura iyo App Store, tinoenda kuchikamu chekupedzisira chiri pasi pechidzitiro uye chinonzi zita Zveshuwa.
Tevere, zvese zvakamirira kunyorera zvicharatidzwa kumusoro. gamuchira inogadziridza. Huwandu hwezvikumbiro hwakamirira kugashira huchave hwakaenzana nenhamba inoratidzwa mumufananidzo inomiririra chishandiso.
Iye zvino isu tinongofanirwa kubaya pane bhatani Gadziridza kutanga kudhawunirodha vhezheni itsva yeapplication iyo inosanganisira nhau dzatinogona kuwana mune tsananguro yekushandisa.
Inokurudzirwa kwazvo kugadzirisa yega yega yega maapplication atakaisa pane yedu iPad, nekuti iwo haangobatanidze nhau chete, asi kazhinji, Izvi zvinogadziridza zvinosanganisira kugadzirisa mashandiro uye kugadziridzwa kuenderana ine yega yega yekuvandudza iyo Apple yakaburitswa yeIOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuvandudza iPad maapp
Iwo mashanu akanakisa anomhanya maapplication e iPhone
IPhone 7 Concept ine Galaxy S6 Edge Zvimiro